युवा शक्तिः उपयोग वा दुरुपयोग - MeroReport
युवा शक्तिः उपयोग वा दुरुपयोग
अन्तराष्ट्रिय युवा दिवस यो साल पनि आयो र गयो । यसैको सेरोफेरोमा युवा शशक्तिकरण, साझेदारी, नेतृत्वमा सहभागिता र युवाको भुमिका केही बर्षदेखिका सदावहार सवालमा बहस चल्यो र अहिले पनि चलिरहेको छ । बहस निरन्तर चलिरहने प्रकृया हो यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । नेपालको कानून अनुसार युवा भनेको १८ देखि ४० बर्ष उमेर समुहको जनशक्ति हो । उमेर, शिक्षा, पेशा, बर्ग तथा भुगोलको आधारमा युवाका चाहना, रुची र क्षमता फरक फरक हुन्छन् । यद्यपी युवालाई सिंगो समुदायको रुपमा बुझ्ने हो भने युवा श्रमबजारको अत्यन्तै उर्जाशिल समुदाय हो । राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा युवा केन्द्रित छलफलले ब्यापकता पाइरहेको बेला कसैले पनि सजिलै उत्तर खोज्न नसकेको यक्ष प्रश्न हो, आजका दिनसम्म आइपुग्दा हामीकहाँ युवाको शक्ति उपयोग गरिरहेको छ की दुरुपयोग? यसलाई राजनीतिक र गैर–राजनीतिक दुई आधारमा मन्थन गरौ ।
कुरा राजनीतिबाट शुरु गरौ । दलका कार्यकर्ताका रुपमा युवाको बर्चस्व छर्लङ्गै देख्न सकिन्छ । परिवर्तनका कुनै पनि मोर्चालाई गतिदिन होस् वा हिंसात्मक बाटोबाट शक्ति हत्याउन, दलिय नेतृत्व तहले सधै युवालाई अघि सार्ने गरेको यथार्थलाई सप्रसंग व्याख्याको जरुरी पर्दैन । शुरुमा शान्तिप्रीय तरिकाले सम्झाउनु, सम्झाउँदा मानेन भने भौतिक कार्वाही गर्नु वा आफैले त्यस्तो कार्वाही भोग्नु तर कहिल्यै पछि नहट्नु दलीय राजनीतिमा लागेका युवाको आम बिशेषताजस्तो बनिसकेको छ । राजनीति प्रतिक्षित युवाका कृयाकलापबाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ की नेतृत्वले आफ्नो युवा दस्तालाई दिने एउटा निर्देशनात्मक शिक्षा यस्तै छ । आफुलाई अहित हुने कुरा छ भने कानून पनि नमान्नु । सत्ता, शक्ति प्राप्ती र स्वार्थ पुर्तिका लागि नैतिकता नामको बस्तु आफुसँग बोकेर नहिड्नु । कार्यकर्ताले गरेका जघन्य अपराधलाई अनदेखा गर्नु, कार्यकर्ता जस्तोसुकै अपराधी, गुण्डा वा आतंक मच्चाउने होस् कुनै न कुनै रुपमा दलको अर्थभण्डारमा योगदान गर्छ भने बिरोधका स्वरहरुलाई एककानले सुन्नु अर्कोले उडाउनु । नेतृत्वबाट यसरी नै प्रशिक्षित युवाको जमातले राजनीतिमा पकड जमाएको यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ । राजनीतिक बिचारधाराले प्रशिक्षित युवाबाट समाजका बिभिन्न तप्काले राम्रो कामको अपेक्षा राख्न नसक्ने कारणमध्ये मुख्य कारण हो दलका युवाहरु रचनात्मक भुमिकामा भन्दा बिध्वंसात्मक भुमिकामा रमाएकाछन् भन्ने आम बुझाई जुन सत्यताको नजिक छ । हनुमान शैलीको राजनीति उनीहरुको मुख्य ध्येय हो । जसरी हुन्छ सत्ता र शक्तिको वरिपरी घुमिरहनु । यथार्थभन्दा टाढाका सपना बाँड्नु तर कहिल्यै पुरा नगर्नु । राजनीतिक दल नजिक युवाहरुको गतिबिधिबाट हिजोआज जो कोहीले पनि यस्तै अनुमान गर्छ ।
युवाहरु राजनीतिमामात्र छैनन् । स्वतन्त्र रुपमा समाजसेवामा संलग्न युवाहरुको जमात पनि मनग्गे छ समाजमा । युवालाई अपराधीक गतिबिधिमा लाग्न नदिन, लागु औषधबाट टाढा रहन, युवा क्लव वा अन्य कुनै सामाजिक संघसंस्थामार्फत सिर्जनशील काममा लाग्न र अरुलाई पनि त्यस्ता काममा लाग्न प्रेरित गर्ने गैर राजनीतिक परिचय बनाएका युवाहरुको जमात पनि उल्लेख्य छ समाजमा । सह–अस्तित्व, सहकार्य, भातृत्व, मेलमिलाप, शान्ति स्थापना, समाज विकास, सभ्य, सुसस्कृत र सुरक्षित समाजको निर्माणको सपना बुन्दै समाज रुपमान्त्रणमा सक्रिय छ यस्तो युवा जमात । जसले नकारात्मक भुमिकामा हैन रचनात्मक भुमिकामा युवाको परिचय बनाएको छ । युवाको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचको सवाललाई मुलधारको सवाल बनाउनका लागि स्वतन्त्र रुपमा कार्यरत युवाहरुको अहम भुमिका रहेको छ । हिंसाले ल्याएको परिवर्तन दिर्घकालिन हुदैन । अहिंसात्मक रुपमा रुपान्तरित समाज न्यायपुर्ण र शान्त हुन्छ । स्वतन्त्र युवाको रुपमा संगठित गैर–राजनीतिक युवाहरुले यसरी वकालत गरिरहेका भेटिन्छन् ।
राजनीतिक दलमा आवद्ध युवाहरुको नजरमा स्वतन्त्र अर्थात कुनै संघसंस्थामार्फत गैर राज्यको भुमिकाका सक्रिय युवाहरु साम्राज्यबादीका एजेन्ट हुन्, पुजिँबादका दलाल हुन् । दलमा आबद्ध युुवाहरु आम रुपमा स्वतन्त्र युवालाई भन्छन् तिमीहरु राजनीतिलाई घृणा गर्छौ तर राजनीतिज्ञबाट फाइदा लिन खोज्छौ । थप आरोप छ स्वतन्त्र युवाहरु बिभिन्न स्वार्थ बोकेर आएका दातृ निकायको चम्चागीरी गर्छन् युवा अधिकार र शसक्तिकरणको नाममा । गरिबी, अन्याय, अत्याचार कम गर्न भन्दा पनि यस्ता युवाहरुको काम समाजलाई भ्रष्ट र अनैतिक बनाउनु हो भन्ने आरोप छ स्व्तन्त्र युवामाथि । तर सामाजिक क्षेत्रमा लागेका युवाहरु बहस खुलेर भन्छन्, ‘राजनीति फोहोरी खेल हो ।’ स्वतन्त्र युवाको बुझाई अनुसार राजनीतिक दलका युवाहरु ढुंगां हान्न, मान्छे कुट्न, तोडफोड गर्न र हिंसा मच्चाउन बाहेकका कामै जान्दैनन् । उनीहरु रचनात्मक काममा भन्दा हिंसात्मक काममा रमाउँछन् । जसलाई उनीहरु आफ्नो संसार ठान्दछन् ।
राजनीतिक दलका मान्छेले आफु अनुकुल उपयोग गर्ने, सामाजिक कार्यमा लागेका व्यक्तिहरुबाट पनि आफ्नो हितका लागि युवाको उपयोग भैरहने र एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गरिरहने हो भने यस्तो कामबाट युवाशक्तिको उपयोग हुन्छ की दुरुपयोग? राजनीतिक दलमा आवद्ध होस् वा गैर राजनीतिक कृयाकलापमा, सबभन्दा मुख्य कुरा युवाले के बुझ्नु पर्छ भने राजनीतिक र गैर राजनीतिक युवाहरु एकठाउँमा नआएसम्म समाज रुपान्तरण सजिलोसँग हुन सक्दैन । माध्यम फरक फरक भएपनि युवाले चाहेको परिवर्तन हो । समाजको विकास युवाको सपना हो । तँ राजनीतिक, म स्वतन्त्र, तँ स्वतन्त्र, म शक्तिशाली, तिमीहरु साम्राज्यबाद, पुजिबाँदका एजेन्ट, तिमीहरु अतिबादी नेता जस्ता आरोप प्रत्यारोपले युवा शक्तिको दुरुपयोग रोकीदैन । राजनीति समाजको मुल नीति हो । राजनीति सम्प्रिदा त्यसको फाइदा सबभन्दा पहिले युवा वर्गले नै पाउँछ । स्थायित्वले सुन्दर भविष्यका मार्गहरु प्रशस्त पार्ने हुनाले सुन्दर भविष्यको फल चाख्न पाउने पहिलो हकदार अहिलेको युवा हो । राजनीति सबैले बुझ्नुपर्छ । स्वतन्त्र बस्ने की पार्टीको झन्डामा गोलबद्ध हुने भन्ने कुरा व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत निर्णय हो । स्वतन्त्र युवाको रुपमा वकालत गर्ने जमातले राजनीति फोहोरी खेल हो यसको नजिक जानै हुन्न भन्दै छिछिदुरदुर गर्न छोड्नुपर्छ । दलका युवाहरुले पनि स्वतन्त्र भुमिकामा काम गर्नु भनेको कुनै बाह्य शक्तिको लागि काम गर्नु हैन भन्ने कुरालाई हृदयंगम गर्नुपर्छ । जसले जुन भुमिकामा काम गरे पनि चाहेको समाज रुपान्तरण हो, स्थायी पविर्तन हो, शान्ति, सुसाशन र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु हो ।
युवा स्वयंले यो कुरालाई बुझेर राजनीतिक र स्वतन्त्र नभनी युवाको रुपमा हातेमालो गर्ने हो भने युवाले खोजेको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको मुद्दाको सम्बोधन हुन्छ । अनि सुनिश्चित गर्न सकिन्छ साझेदारी, नेतृत्वमा सभागिता र भुमिका । हैन भने हाम्रो युवा शक्ति राजनीति र गैर राजनीतिक क्षेत्रको हित अनुकुल उपयोग र दुरुपयोग भै नै रहन्छ ।